Kuburitswa kweVakadhirikirwa neMugodhi kuBindura Kwokanganiswa neMvura
Zviri Kutepfenyurwa Izvozvi Livetalk: The Connection with Mike Hove
Mbudzi 30, 2020
Vanhu vakamirira kuburitswa kwehama dzavo mumugodhi weRan Mine wakadhirika
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi kana kuti Civil Protection Unit kana kuti CPU VaJonathan Nkomo vanoti vari mubishi kuyedza kubvisa mvura kuti vaburitse vanhu vakadhirikirwa nemugodhi paRan Mine, kuBindura.
Kubvisa mvura uku kwakapa kuti mumwe murume aibatsira adonherwe nedombo achibva afa neMugovera.
Mufi, VaBlessing Bere vakafa vachiedza kuisa pombi yekukweva mvura panzvimbo yakadhirikirwa vanhu vanofungidzirwa kuti vari pakati pemakumi matatu nemakumi manomwe.
Mumwe aishanda naVaBere VaMunashe Kandawasvika vanoti VaBere vakadonherwa nedombo vachibva vadonhera mumugogdhi.
VaNkomo vanoti sezvo mutemo uchibvumira vanhuwo zvavo kubatsira panenge paitika njodzi hurumende inosungirwa kubatsirawo pakuvigwa kwaVaBere.
Patabvunza kuti vave pachinhano chipi mukuedza kufukunura vanhu vakadhirikirwa nemugodhi, VaNkomo vati parizvino vachiri kurwisana nekukweva mvura sezvo mugodhi uyu wanga wave nenguva yakareba usingashande.
Amai Senzeni Nyengeta vanoti mwana wavo VaTichaona Nyengeta mumwe wevanhu vakadhirikirwa nemugodhi.
Mumwe wevechidiki muBindura VaNyasha Moyana vanoti dambudziko iri raratidza kuti hurumende haina kugadzirira matambudziko akadai sezvinotarisirwa.
Asi VaNkomo vanoti hurumende yega haingazvikwanise vachiti vemakambani akazvimirira vanofanirwa kuisa misoro pamwechete nehurumende kugadzirisa matambudziko anowira vanhu vasingafungire.
Amai Nyengeta vanoti nhamo yekushaya basa ndiyo yauraisa mwana wavo zvisinei kuti anga akadzidza.
Mashoko aya atsinhirwa nemukuru wesangano rinoona nezvekucherwa kwezvicherwa reCentre for Natural Resource Governance-CNRG) VaFarai Maguwu. VaMaguwu vanoti vanhu vari kuchera goridhe havana hunyanzvi hunotarisirwa izvo zvave kuita kuti vakawanda vafire mumigodhi.
Hatina kukwanisa kutaura nevakuru veRan Gold Mine sezvo nhare yavo yange isiri kudairwa kumohofisi avo ekuHarare. Kambani iyi haina mahofisi muBindura.
Gwaro rakaburitswa neZimbabwe Enviromental Law Association (ZELA) muna Nyamavhuvhu gore rino rinoti migodhi yakawanda yakavhara nekuda kwehupfumi hwenyika hwawondomoka, nyaya dzezvematongerwo enyika dzisina kumira zvakanaka pamwe nekukundikana basa kwevakuru vemakambani ehurumende anoona nezvezvicherwa.
ZELA inoti nekuda wekuvharwa kwemakambani, vanhu vakawanda vave kuita basa rekuchera zvicherwa pamigodhi yakavharwa asi ine njodzi yekudhirika sezvo yagara kwenguva yakareba isingashande.
Masvondo maviri apfuura vamwe vanhu gumi vakadhirikirwa nemugodhi paPremier Estate pedyo neMutare. Gore rapera vamwe vanhu vanosvika makumi mana vanofungidzirwa kuti vakadhirikirwa nemugodhi weEdorado pedyo neChinhoyi.
Nyaya Ina Nunurai Jena